धादिङको गंगाजमुना ६ र ७ को सिमानामा बन्ने भयो नेपालकै दोस्रो लामो झोलुङ्गे पुल - Radio Bihani
धादिङको गंगाजमुना ६ र ७ को सिमानामा बन्ने भयो नेपालकै दोस्रो लामो झोलुङ्गे पुल
२३ मंसिर २०७८, बिहीबार १६:४५
धादिङ २३ मङ्सिर
धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ मा पर्ने अधेरी खोला र ताथली डाँडामा नेपालकै दोस्रो ठुलो झोलुङ्गे पुल बन्ने भएको छ । ३ करोड २० लाख लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त झोलुङ्गे पुलको बिहिबार एक कार्यक्रमका बिच शिलान्यास गरिएको हो ।
व्रिज सस्टेन्सन कार्यालयको आर्थिक स्रोतमार्फत बन्न लागेको पुलको गङ्गाजमुना गाउँपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष भक्त बहादुर लामिछानेले शिलान्यास गर्नुभएको हो । ४ सय ८ मिटर लामो र २ सय मिटर उचााईमा बन्न लागेको उक्त पुल निर्माणपश्चात पर्यटन प्रबद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने वडा अध्यक्ष लामिछानेले बताउनु भयो ।
साथै केही दिनमा नै बन्जिजम्प र रोपलाइनको समेत डिपिआर गरेर छिट्टै निर्माणको चरणमा जाने समेत अध्यक्ष लामिछानेको भनाइ छ । पुल निर्माण कार्य यही बैशाख मसान्तसम्ममा सक्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ ।
उक्त पुल निर्माणसँगै सञ्चालनमा आउने बन्जी जम्प र रोप लाइनले गंगाजमुना गाउँपालिकाको साथै धादिङ जिल्लाकै पर्यटन प्रबद्र्धनमा टेवा पुग्ने अध्यक्ष लामिछानेको विश्वास रहेको छ ।